February 25, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 7
Soomaliya, mar ayay ahayd wadanka ugu dimuquraadiyada wanaagsan ee Afrika, xilina waxay ahayd dal ay xukunkiisa la waregeen Askar hubeysan, Dimuquraadiyad curdan ahayd iyo Dastuurkana la laalay, Haddana 30 sanno ku dhawaad malehyn dawlad sharci ah, Sanooyin badan wxay soo martay KMG xukuumad ah, 8dii sano ee na weydaartayna waxay ahayd Dawladd aan wali Hay’adaheedu laheyn awooda u dambeysa, xili kastana waxaa bilowda 4tii sanaba mar is qabqabsi xagga Xukunka iyo doorashooyinka ah oo halis weyn galiya daganaanshaha iskaba yar marar badan.
Hadda kama hadlayno taariikhaha aan soo sheegnay, waxaanse is dhex tagaynaa labo xaqiiqo oo ka kala jirta gudaha Soomaaliya-dii Midowday 1960-kii, Dhinac waa Doorashooyin ugu yaraan cadaalad, sinaan, tartan xor ah kamuuqato iyo Doorashooyin 4tii sanaba muran iyo qeylo halis badan leh ku jira, waana Is barbardhiga Dorashooyinka hadda loo madlan yahay ee Koonfurta Soomaaliya & Waqooyiga (Somaliland).
Koonfurta dalka, waxay gaartay xaraarada ama kulka ka dhashay Doorashooyinka 2021-ka, arrintooda meel halis badan, Siyaasiinta qaarkood waxay ku celiyeen halkii burburka kasoo bilowday ee 1991-dii, Hadaladooda ayaa lahaa ficilo waa weyn oo abuuri karay kala qeybin bulsho iyo Dhawaaqaha Reeraha oo aan Soomaaliya waqtigan dan ugu jirin.
Koonfurta Soomaaliya, 4tii Sanna-ba marka ay dhamaan rabto mudo xileedka Xukuumadda xiligaasna, waxaa la gala Dabeylo siyaasadeed, hardankuna wuxuu u dhaxeeyaa cida kursiga fadhida xiligaas iyo kooxda banaan jooga ah, ma jirto siyaasad iyo ajende dadweyne loogu adeegayo, balse waxaa jira Shabakado iyo Isbaheysiyo yoolkoodu yahay oo kaliya Kursiga & Ka sameynta dhaqaale.
Soomaaliland, jamhuuriyada aan aqoonsiga caalamiga ahi haysan, gooni istaagana uga dhaqaaqday soomalia sanadkii 1991, ayaa doorasho u dareeraysa sanadkan.
Farah Abdikadir Mohamed
The election in Somaliland is election dominated by one tribe Ishaq had already liberated its land and it is easy for ISHAQ TRIBES TO HELD ELECTION they are some part of Somaliland not under the Ishaq administration Dhulabhante and Warsangle never will be part of ISHAQ administration although Lascanood is now under the Ishaq administration it will never be part of Ishaq administration we do not mined if Ishaq does not want to be part Somalia that are there choose not they can not force DHULABHANTE AND WARSANGLE TO BE PART OF ISHAQ DOMINATION AND OPPRESSION TIME WILL TALE THEREFORE THE ELECTION HELD IS SOMALILAND IS ELECTION FOR ISHAQ TRIBES THEREFORE DO NOT COMPARE WITH SOMALIA Similiar the election will be healed in PUTLAND willbe tribe election it will be DAAROD election
Isaaq hadi ka mid noqdaan Somalia nidaamka hal cod iyo hal qof dalka qaato anaga Puntland ahaan ma ino wanaagsano maxa yeelay Hawiye,Isaaq, Raxanweyn ayaa qeybsanahaya awooda dalka hadi tirada dadka la fiirsho. Somaliland goosashadeeda aanaga faydo ayaa inookub jirta maxa yeelay codka Puntland/Jubbaland waa la tartami kara Hawiye.
Farax faaruq DUF KU BAX maxaa tiri? [Soomaaliland, jamhuuriyada aan aqoonsiga caalamiga ahi haysan, gooni istaagana uga dhaqaaqday soomalia sanadkii 1991,] hhhhhh xagee eyduur dabo cayuun jamhuuriyad ku noqdeen hhhhhh. Ayagana ma weey kugu shubteen sida farmaajo? Wax jamhuriyad somaliland la dhoho ma jirto riyada ka toos mr faaruq.
Boowe cayda ma wanaagana, xaasidnimadana ma wanaagana.
Somaliland Jamhuuriyad jirto waaye maanta, sanadkan ayaa la aqoonsanahaya saa filahayo.
Faarah, the Editor Thank you si yar oo kooban ayaad uga hadashey xaqiiqda ay kala joogaan labadii dal ee midoobay 1960 iminkana kala tegey mudo 30 sano kahor laba dalna kala noqday halkii 1960 ayay ku noqotay Oo ah Somalia iyo somaliland.
Ogob xitaa magacii lagu midoobay ma ahayn Somalia ee wuxuu ahaa SOMALI Republic.
Tafatiruhu wuu ka koray reero iyo qabiil bogiisa waxa ku xidhan Cidwalba aduunka dacalasiisa kala jooga waana nin si fiican u wata hawshiisa thank you mr Editor Farah.
Kuwa xigdiga iyo taariikhda isleh been ka sheega naftooda ayay been ku maaweliyaan xaqiiqduse hortooda ayay taal.
Kuwa cayramaya ama is leh cidbaad wax yeeli kartaan waxan kula talin lahaa inay si wanaagsan oo cilmiyeysan oo xaqiiq ku salaysan u doodaan.
Somaliland waa dal madax banaan si xor ahna u doorta madaxweyne one man one vote mudo dheerna sidaa kusoo socotay inshalah doorashadan soo socotaa wadankoo dhan ayay ka dhacaysaa min looyacado ilaa Sanaag.
Ninkii isagu isleh ka deji calanka ka babanaya min looyacado ilaa Sanaag banaanka hays keeno waxna yaanu la hadhin waxba yaan lakala gurin Reer somaliland waa mid will be for ever.
JAMHUURIYADDII WARQADDAAS REER SIYAAD ISKU DIREEN AYEY KU DHAMMAEY, EE WAX KALE MA HAYSAAN, MODH – NA SOO NOQON MAAYO EE SOOMAALAY KALA DANEUYSO.
aniga oo daba socda nin afka ingiriiska halkan wax ku soo qoray somaliland ma aha isaaq dad kala duwan bay ka koobantahay laascaanood waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu bilicda iyo muuqaalka wanaagsan somaliland markii puntland ka talinaysay haliskuul oo secendry ma lahayn maantana dhowr jaamicadood bay leedahay waxay leedahay dhakhaatiirta uga tayada wanaagsan somaliland waxaa looga yimaadda puntland wxa mashaariic ka soctan malayn maysid ama qiyaas ma laha ammaan baa ka jirta kala danbayn baa ka jirta waa maagalo camiran maalin dhawyd oo aan socod ku tegay waan yaabay is beddelka balaadhan ee laga sameeyay 10 ka hor mar aan tegay waxay ayayd tuulo markaa wa wax illahay loogu mahad naqo horumarka ka socda laascaanood mid kale somaliland abiil ma laha waa dal la wada leeyahay cudada iyo xiqdiga ha la iska saaro